मंसिर ९ गते बिहिबार – यस्तो छ तपाईको भाग्य! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस् – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/मंसिर ९ गते बिहिबार – यस्तो छ तपाईको भाग्य! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
वृश्चिकः व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा सापटि दिईएका रकमहरु फिर्ता आउनाले दैनिकी सुदृढ हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्वबाट सहयोग पाईनेछ भने मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । माया प्रेम तथा जीवन साथीको भरपुर सहयोग पाईनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । छोटो तथा उपलब्धी मुलक यात्रा हुनेछ ।
कुम्भः बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा समय लगानी गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट पढाई लेखाईमा मन नजादा भनेजस्तो नतिजा हात पर्न सकिने छैन । काम गर्दा वा सवारी चलाउँदा ध्यान दिनुहोला द ण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आई खर्च बढ्ने योग रहेको छ ।